အန်ဒါမန်ဟီးရိုး: October 2010
၁၃-၁၀-၂၀၁၀ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညBBCလွတ်လပ်အတွေး?ဆွေးနွေးဖလှယ်ဏ္ဍသို့ကျွန်တော်ကတော့၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်တွေကိုရွေးချယ်ပေးချင်လို့ပါ။ ၁၉၉၀တုန်းကအမတ်လောင်းတစ်ဦးချင်းရဲ့အရည်အချင်းကိုသေသေချာချာအကဲမခတ်ဘဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးစိတ်နဲ့NLDကိုပုံအောပေးခဲ့တဲ့အခါ၊လက်တွေ့မှာနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်သူတွေအများကြီးရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာLandslideဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အာဏာရအောင်မယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီနေရာမှာနအဖအကျင့်ယုတ်တာကိုချည်း ယိုးမယ်ဖွဲ့မနေဘဲကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုရိုးရိုးသားသားပြန်ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်။(ပြောစရာတွေအများကြီးပါ။ စာရှည်သွားမှာစိုးလို့လိုရင်းပဲပြောပါမယ်)။ဒီတစ်ခါမှာတော့အာဏာမရရင်နေပါစေ။ပြည်သူကိုသစ္စာရှိမယ့်အမတ်လောင်းတွေကိုပဲရွေးချယ်ပေးချင်ပါတယ်။ ရှားသားမီးခဲလေးတစ်ခဲရှိထားရင်အချိန်မရွေးမီးတောက်ကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကောက်ရိုးမီးတောက်ကြီးကိုတော့ အထင်မကြီးတော့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုသမိုင်းကဒီလိုပဲသင်ကြားပေးလိုက်ပါပြီ။မှတ်ချက်။ ။ဘက်မလိုက်တဲ့မီဒီယာမှန်ရင်ကျွန်တော့်စာလေးကိုဖော်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါသည။် ကိုမြ၀င်း သာယာဝတီမြို့
by ရွှေမော်ကွန်း မဂ္ဂဇင်း on Tuesday, 19 October 2010 at 22:20ခေတ်မှာ၊ဖဆပလတို့ဘုန်းတန်ခိုးထွားနေသည့်အခါသမယ။ပထမဆုံးမြူရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တော့မည့်အချိန်'သာဓုက စာရေးဆရာပေါက်စဖြစ်နေဆဲကာလ။တစ်နေ့တွင်ကျားကူးကွက်သစ်သာဓုတို့နှင့်မလှမ်းမကမ်းတွင်နေသော၊ကိုလှပို၊မသန်း (ယခုမောင်မော်ဘရားသား၊ဗိုလ်ချုပ်ဈေး)တို့နှင့်အတူသခင်သိန်းမောင်ဆိုသူ(ယခင်ကမသိဖူးသော)ရပ်ကွက်မိတ်ဆွေ သာဓုထံရောက်လာကာ. . .'ဒီမှာဗျ-ဆရာ-ဦးသာဓု၊-ခု-မြူရွေးကောက်ပွဲမှာ-ဝင်အရွေးခံပါလား'ရုတ်တရက်-သာဓု-အံသြသင့်သွားသည်။။ဂျပန်ခေတ်လွတ်လပ်သောရုပ်သေးအစိုးရဖွဲ့ပြီးသည်မှစ၍ပါတီနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဒုံးဒုံးချကျောခိုင်းခဲ့သူသာဓုအဖို့အဆန်းလိုဖြစ်သွား၏။အလျဉ်းသင့်၍အနည်းငယ်ရှင်းပြရန်လိုအပ်လာသည်မှာအထက်၌'ပါတီနိုင်ငံရေး'ဟုဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းအလွန်ကျဉ်းမြောင်းသော၊အာဏာရရေးသာအဓိကဖြစ်နေသော၊ပါတီမှိုလိုပွနေသောနိုင်ငံရေးကိုသာဓုကျောခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ဤတွင်ထပ်၍ရှင်းရန်လိုလာပြန်သည်မှာယခုစာအုပ်တစ်နေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းနိုင်ငံရေး၊လူမှုရေး၊ဆက်ဆံရေး၊ ရဲဘော်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရေးစသည့်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သို့မဟုတ်အားလုံးကြောင့်သာဓုသည်သခင်သန်းထွန်း၊သခင်အောင်ဆန်း၊သခင်စိုး၊သခင်မြ၊သခင်လေးမောင်စသူတို့နှင့်စိတ်သဘောထားချင်းမဟပ်မိကြစေကာမူသူတို့တစ်တွေ ဘာကောင်မျှမဟုတ်ကြသောအခါ(ဝါ)သူလိုငါလိုသာမန်အရပ်သားများဘဝသို့ပြန်ရောက်လာသောအခါတွင်ကားခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်မှုရှိလာကြပြန်သည်။တစ်ခါက-သာဓု-ဘု-မှုတ်ခဲ့သဖြင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်သွားသောဂျပန်ခေတ်ဝန်ကြီးသခင်သန်းထွန်းသည်အင်္ဂလိပ်များ ပြန်ဝင်လာသည့်နှင့်သူဆိုက်ကားကလေးစီးပြီးခရီးနှင်နေရရှာသည်။တစ်ညနေသာဓုကဗဟန်းဈေးသို့-ပူတူတူး-ပေါင်ဒါများ သွားပို့စဉ်သခင်သန်းထွန်းကိုဆိုက်ကားပေါ်တွေ့လိုက်ရသဖြင့်သာဓုကပင်လှမ်းခေါ်ပြီးလက်ဖက်ရည်သောက်ဖိတ်ရာ. . .'အတော်ပဲ၊ကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့တွေ့ချင်နေတာဟုသူကအပြုံးနှင့်လက်ခံ၏။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲရောက်ကြလေပြီ။သာဓုအားနိဒါန်းပျိုးစရာမလို၊မကြိုက်ကြောင်းသူသိထားသည့်အတိုင်း. . .'ခုကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနစ်ပါတီဖွဲ့စည်းပြီးပြီ၊အတော်လည်းခရီးရောက်နေပြီ၊သခင်ဖေသန်း၊ကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲလုပ်ပါလား'ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ရန်-သာဓုကိုသူကကမ်းလှမ်းသည်။သာမန်အခွင့်အရေးမဟုတ်သည်ကိုသာဓုနားလည်၏။သခင်သန်းထွန်းတို့ အုပ်စုသည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသို့ပေါ်ပင်သခင်ပေါ်ပင်နိုင်ငံရေးသမားများကိုလက်မခံ။သို့တိုင်အောင်သာဓုမှာပါတီနိုင်ငံရေးကိုလုပ်လိုစိတ်မရှိတော့သောကြောင့်သူ၏ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုသာဓုဂုဏ်ယူမိကြောင်းနှင့် အခြေအနေကမပေးသေး၍မပါဝင်လိုသေးကြောင်းငြင်းဆန်လိုက်ရာ. . .'စဉ်းစားပါဦး၊သခင်ဖေသန်းရာ၊ခင်ဗျားလိုလူတစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ရမယ်ဆိုရင်'သို့လျှင်စကားအဆုံးမသတ်သေးဘဲတွေနေပြီးမှသာဓုကိုဆက်၍အမွှန်းတင်နေတော့၏။သိပ်လဲထင်မထားပါနဲ့ဗျာ၊ကျွန်တော်လည်းသူလိုငါလို''မဟုတ်ဘူး-သခင်ဖေသန်း၊ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်သေသေချာချာနားလည်ထားတယ်၊စစ်မဖြစ်မီအင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းက (ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မိ)ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်အလယ်ပိုင်းတို့ဗမာအစည်းအရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချလိုက်ရင်တစ်ပြည်လုံး ဂယက်ရိုက်ရုံမကဘူး၊တို့ဗမာအစည်းအရုံးဌာနချုပ်ကိုပါအဖျားခတ်ခတ်သွားတယ်၊ဒါတွေဟာခင်ဗျားလက်ချက်ချည်ပဲသိတာ ပေါ့'(သခင်သန်းထွန်းဆိုလိုသည့်အကြောင်းအရာစုံကိုတနေရာတွင်ရှုပါ)'ထားပါတော့လေ၊ခုကျွန်တော်မှပါတီနိုင်ငံရေးကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘဲ'ဟုတ်ပြီလေ၊စိတ်မဝင်စားတာဝင်စားတာကခင်ဗျားဆန္ဒ၊စိတ်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်ရမှာကကျွန်တော့်တာဝန်မဟုတ်လား၊ဒီတော့ ကျွန်တော်ဇွတ်ပြောရမှာပဲ၊ဒီမှာသခင်ဖေသန်း၊ခင်ဗျားလည်းမှတ်မိမှာပေါ့၊တရားပွဲဟောပြောပွဲတစ်ခုခုမှာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဆုံမိကြတိုင်းကျွန်တော်တို့သခင်သိန်းမောင်ကြီးတို့၊သခင်အောင်ဆန်းတို့ကဘိုးစိန်ကြီးလိုနောက်ဆုံးမှထွက်မယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကို ရှေ့တန်းတင်ပေးလိုက်ရော၊ခင်ဗျားကထိပ်ဆုံးကနေဒေါက်ဒေါက်ဒက်ဒက်နဲ့ပြောချသွားရော၊ကျွန်တော်တို့အလှည့်ရောက်တော့ ပြောစရာအချက်အလက်မကျန်သလောက်ဖြစ်သွားခဲ့ဖူးတာတွေလေ' သာဓုက-ခေါင်းညိတ်ရုံခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။အင်း၊ကျွန်တော်တို့မှာ-အဲအဲ-သခင်ဖေသန်း-ပြောသွားသလိုပါပဲ'နဲ့ပြီးသွားရတယ်၊အဲသလိုခင်ဗျားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောတတ်တာရယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးဘဝမှာတောင်ခင်ဗျားမှန်တယ်ထင်ရာကိုရဲရဲကြီးပြောချလိုက်တာရယ်၊ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုး၊ အရည်အချင်းမျိုးရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုတယ်'သာဓုကမူတွင်တွင်သာခေါင်းခါခဲ့၏။(အကယ်၍ထိုစဉ်ကသာသူ့ပါတီဝင်၊သူနှင့်အတူတောခိုခဲ့မိချေကထိုမဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပင်ဖြုတ်ထုတ်သတ်ထဲပါသွားမည်မှာသာဓုအရိုးဆွေးလောက်ပေပြီ။)သူကဆက်လက်၍ဇွတ်ပြောသေးသည်။သာဓုကလည်းဇွတ်ပင်ငြင်းဆန်ရာမှနောက်ဆုံး'စဉ်းစားပါ့မယ်ဗျာ'ဟုပြောလိုက်မှပင် မကျေမနပ်လေသံဖြင့်. . .'အေးလေဗျာ၊ကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုမကြိုက်လို့ဆိုလည်းတစ်ခုခုတော့လုပ်ဗျာ၊ခုသခင်မြတို့လည်းဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ထောင်ကြလိမ့်မယ်၊ဝင်လုပ်ချင်လုပ်ပါ၊ဒီအတိုင်းတော့ဘေးဖယ်မနေစေ့ချင်ဘူး၊သခင်ဖေသန်းလိုလူတစ်ယောက်နိုင်ငံရေးက ကြဉ်သွားတာတိုင်းပြည်နာတယ်၊ဖဆပလထဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လုပ်ပေါ့ဗျာ၊နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်အတွက်တစ်ခုခုတော့'ဒီစကားကိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးသခင်သန်းထွန်း၊ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကရှောင်ကြဉ်သွားလို့တိုင်းပြည်နာတယ်ဆိုတာ လွတ်လပ်ရေးဗိမာန်ကြီးတည်ထောင်ရာမှာအုတ်တစ်ချပ်လပ်သလောက်ရှိမှာပါ၊ဘယ်သူဝင်ဖြည့်ဖြည့်ရပါတယ်၊တကယ်လို့ ကျွန်တော်ပါဝင်ဆောက်လို့တစ်ခုခုမှားသွားရင်ဒီဗိမာန်ကြီးတစ်စိတ်တစ်ဒေသသော်လည်းကောင်း၊တစ်ခြမ်းသော်လည်းကောင်း ပျက်စီးသွားနိုင်စရာကောမရှိဘူးလား၊ခင်ဗျားကကျွန်တော့်ကိုအရေးကြီးတဲ့အဆင့်မှာထားပြီးပြောနေတော့မှားစရာရှိလည်း အရေးကြီးကြီးမှားမယ်မဟုတ်လား'ဤတွင်သူအဓိပ္ပာယ်ပါပါပြုံးလိုက်ပြီးမှ. . .'ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုလိုချင်တယ်ပြောတာပေါ့၊အေးလေဘာဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားဦးပေါ့ဗျာ၊တွေ့လည်းတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဟုတ်လား၊ ခင်ဗျားကိုဖြစ်စေချင်တာကတိုင်းပြည်အတွက်တစ်ခုခုတော့'သို့စကားကိုအဆုံးမသတ်ဘဲထသည်နှင့်သာဓုကသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးစရိတ်ကိုစုံစမ်းပြီးငွေ၂ဝဝကျပ်ပေးလိုက်၏။ထိုစဉ်က-သာဓု-ပေါင်ဒါလုပ်ရောင်းနေသည်။ထိုနေ့ညကတစ်ညလုံးအိပ်မပျော်၊တိုင်းပြည်အတွက်တစ်ခုခုတော့'ဟူသော သခင်သန်းထွန်း၏စကားသည်နားထဲမှမထွက်ဘဲဘာလုပ်ရမည်ကိုတွေးမရတိုင်းအိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရ၏။ခင်ဗျားလိုလူတစ်ယောက်နိုင်ငံရေးကကြဉ်နေတာတိုင်းပြည်နာတယ်'သူ့စကားသည်စင်စစ်သာဓုနှင့်အလှမ်းဝေးလွန်းသည်ထင်၏။သူ့ပါတီဝင်ရန်ပင့်လိုက်ခြင်းလောဟုလည်းတွေး၏။မည်သို့ဖြစ်စေ တိုင်းပြည်အတွက်တစ်ခုခုလုပ်သင့်သည်ကိုကားသခင်သန်းထွန်းဖော်လိုက်မှသာဓုတွေးရန်ပေါ်လာသည်မှာအမှန်။တိုင်းပြည်အတွက်ဘာတစ်ခုခုလုပ်ရမည်နည်း။နောက်ဆုံးအတွေးပေါက်သည်ကားဘက်မလိုက်သတင်းစာတစ်စောင်ထူထောင်ရန် ဖြစ်လျက်အဘက်ဘက်မှကျွမ်းကျင်မှုရယူလိုသေးသည့်အတိုင်းတတ်အားသမျှပုံနှိပ်စက်ကလေးတစ်လုံးဖြင့်ပဏာမပျိုးခဲ့ရာမှ တိုင်းရေးပြည်ရာသတင်းစာအယ်ဒီတာမဖြစ်ဘဲအချစ်အိမ်ထောင်ရေးစာရေးဆရာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ရ၏။ဤသည်လည်းအများပြည်သူတို့၏အချစ်အိမ်ထောင်ရေး၊ပြုပြင်ရေး၊ကိုယ်ကျင့်တရားရေးရာများရေးသားနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့် တိုင်းပြည်အတွက်တစ်ခုခုအနေဖြင့်အကျုံးဝင်သွားပေပြီ။သခင်သန်းထွန်း၏စေ့ဆော်ချက်ပင်ဖြစ်၍ကောင်းရာသုဂတိလားစေသော်'ဟုသာဓုဆုတောင်းရမည်သာဖြစ်၏။ဆုလည်းအမြဲတောင်းပါ၏။ထိုနည်းအတိုင်းပင်သခင်မြ၊သခင်လေးမောင်၊သခင်အောင်ဆန်းတို့နှင့်လည်းလူလူချင်းအနေဖြင့်သာဓုအခင်အမင်မပျက်ခဲ့။ (တစ်နေရာတွင်ရှုပါ။)သို့လျှင်-သာဓု-ပါတီနိုင်ငံရေးကိုမလုပ်လိုတော့ဘဲပုံနှိပ်စက်ဖွင့်၊စာအုပ်တိုက်ထောင်ကာသတင်းစာထုတ်နိုင်ရေးအတွက် လုံးပမ်းနေခိုက်အထက်ပါအတိုင်းမြူရွေးပွဲဝင်ရန်လာပြောသည်၌'ဟာကျွန်တော်ဝင်အရွေးမခံချင်ဘူး၊ဒါတွေလည်မလုပ်ချင်တော့ဘူး၊ခင်ဗျားဘာစိတ်ကူးရပြီးလာပြောနေတာလဲ''ဒီဖဆပလတွေဆောင့်ကြွားကြွားနိုင်လွန်းလို့၊ပြီးသူတို့လုပ်ပုံတွေလည်းမကြိုက်လို့၊အဲဒါမနေ့ကတစ်နေ့လုံး၊ညကလည်းတစ်ညလုံး ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးကြတယ်၊တိုက်ရမှာကမလွယ်လှဘူးဗျ၊မြို့တော်ဝန်လောင်းဦးသိမ်းမောင်ကလည်းဧရာမပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်နေတာနဲ့ သခင်ဖေသန်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်''ဟား၊ကျွန်တော်ကရောဧရာမပုဂ္ဂိုလ်မို့လား၊တောက်တီးတောက်တဲ့ဗျာ''ခင်ဗျားကစာရေးဆရာမဟုတ်လား၊ပရိသတ်ရှိတယ်ဗျ။အဲဒီတော့တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ဝင်ပြိုင်ဗျာ၊အားလုံးလိုအပ်တာတွေ ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လိုက်မယ်။အတိုချုပ်လိုက်သော်သာဓုအတန်တန်ငြင်း၏။မရ။ဇွတ်အရွေးခံခိုင်းသူများတွင်ဆန်းဦးထွန်းရင်၊ပန်းပုဦးလွင်၊ရှုမဝဦးကျော်၊ ကိုကျော်မြတို့လည်းပါ၏။ကျားကူး၊မင်းမနိုင်၊ယောက်လမ်း၊ထန်းတောကွက်သစ်သာမကကန်တိုမင်တိုက်နယ်မှဖဆဆန့်ကျင်သူ အတော်များများကလာ၍အားပေးကြသည်။တိုက်တွန်းကြသည်။ဘကြီးဘဖေကိုယ်တိုင်ကပင်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖိတ်၍ ထောက်ခံရင်း. . .'မောင့်ကိုစာရေးဆရာသာဓုအနေနဲ့လေးစားလို့တိုက်တွန်းကြတာနော်၊မောင်သာဓုအပြတ်အသတ်နိုင်မှာသေချာတယ်'ဤအထိသာဓုစဉ်းစားဆဲပင်ရှိသေး၏။အကြောင်းသော်ကားသာဓုစိတ်ကိုသာဓုသိသည်။စမိလျှင်နောက်မဆုတ်ချင်။ မြူလူကြီးအရွေးခံရသော်နိုင်ငံရေးစိတ်ပြန်ဝင်လာမည်။ဆက်တိုက်လုပ်မိချေတော့မည်။ပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ဝင်ရန် အကြောင်းပေါ်လာမည်။သာဓုသည်နယ်ချဲ့ကိုသာတိုက်လိုသည်။ဗမာအချင်းချင်းရန်မဖြစ်ချင်။သို့တိုင်အောင်ဘကြီးဘဖေ၏နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုဖြစ်သော . . .အေးလေ-မောင်သာဓု-စဉ်းစားပေါ့၊ကိုယ့်ကိုလေးစားလို့တိုက်တွန်းသူတွေကိုကိုယ်ကလည်းပြန်လေးစားရမယ်မဟုတ်လား'ထိုစကားသည်သာဓုအားအလေးအနက်စဉ်းစားခိုင်းသလိုရှိနေသည်၏အဆုံး၌အာမခံငွေပါသွင်း၍အဆင်သင့်လုပ်လာကြသော စာရွက်စာတမ်းများတွင်သာဓုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကာအစစပြင်ဆင်ရတော့၏။သတင်းစာများတွင်သာဓုအရွေးခံမည့်အကြောင်းပါလာပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်သခင်လှကျွေ(ဆိုရှယ်နီအဖြစ်ခွဲမထွက်သေး)နှင့် အခြား-ဖဆ-တစ်ဦးတို့ရောက်လာကာ. . .ဟေ့-သခင်ဖေသန်း-ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ၊ခင်ဗျားဒါတွေပြန်လုပ်ချင်ရင်ပြေပါလားဗျာ၊ခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်ချင်း ထတိုက်သလိုဖြစ်နေပြီ၊သခင်နုကလည်းတွေ့ချင်နေတယ်၊ခဏလိုက်ခဲ့ပါလားဗျာ'သာဓုခေါင်းခါလိုက်၏။နောက်ရပ်ရွာနှင့်စာပေလူထု၏ဆန္ဒကိုမလွန်ဆန်နိုင်၍ဝင်လိုက်ရကြောင်း၊ဖဆကိုတိုက်သည်မဟုတ်ဘဲ အမှန်တရားဆန့်ကျင်သူများကိုသာရင်ဆိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်သဖြင့်တစ်ကြိမ်ကအလွန်ချစ်ခင်သောရဲဘော်သခင်လှကျွေလည်းစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြင့်ပြန်သွား၏။တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်အခွန်အရေးပါသည့်ဒုတိယတန်းစား-ဖဆ-ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး(အမည်မဖော်သင့်ထင်၏။) ရောက်လာပြန်ကာသာဓုအားယခုအရွေးခံမည့်နေရာမှနုတ်ထွက်ပြီးအခြားရပ်ကွက်တစ်ခုမှဝင်အရွေးခံ-ဖဆကိုယ်စားလှယ်က ဖယ်ပေးမည်၊သာဓုကလည်း-ဖဆ-အနေဖြင့်အရွေးခံရန်စသည်ဖြင့်ဆွယ်၏။သာဓုကလည်းခေါင်းခါမြဲခါသည်။ခင်ဗျား-ပုံနှိပ်စက်ကအတော်အိုနေပြီပဲ၊အသစ်လျှောက်ပါလား၊စက္ကူတို့ပုံနှိပ်မှင်တို့ပါအင်ပို့လိုက်စင် လျှာက်လေဗျာ၊အနည်းဆုံး လေးငါးသောင်းဖိုးလောက်ပေါ့'သူ့စကားကိုသာဓုနားလည်သည်၊သာဓုကယဉ်ကျေးစွာဖြင့်ထိုမျှငွေသာဓုတွင်မရှိကြောင်း၊မလျှောက်လိုကြောင်းလောက်သာ ငြင်းဆန်လိုက်သည်ကို. . .သခင်ဖေသန်းကဗျာ၊လိုင်စင်ရဖို့သာအဓိကပါဗျ'သူဆိုလိုသည်မှာလိုင်စင်လျှောက်၊ရလျှင်ရောင်းစားဟူသည့်ထိုခေတ်ကအင်ပို့လိုင်စင်သောင်းကျန်းစနစ်ကိုပြောရင်းဆွယ်နေသည်။ ဤလိုသိက္ခာကိုထိပါးလာသော်-သာဓု-စိတ်ဓာတ်ဖျတ်ခနဲတင်းမာလာတတ်သည့်အတိုင်းကဲ၊ခင်ဗျားမြန်မြန်ပြန်ရင်ကောင်းမယ်၊ခင်ဗျား-နိုင်ငံရေးသမား-လုပ်နေပြီးဖောက်ပြန်ရေးပညာတွေလာသင်နေတာလား'ဟု မောင်းထုတ်လိုက်ရ၏။သာဓုမှာ-မူလ-စိတ်ထားအတိုင်းအေးအေးနေခဲ့လျှင်ကောင်းလေစွ။ယခုမူအများ၏ဆန္ဒအလျောက်အရွေးခံရန်လက်မှတ်ထိုးမိသဖြင့် အမျိုးမျိုးသောပြဿနာနှင့်တိုးနေရသည်။အပြိုင်အရွေးခံရရန်နာမည်စာရင်းသွင်းထားသူများမှာဦးသိမ်းမောင်၊သာဓုနှင့်အခြားတစ်ဦး။ထိုတစ်ဦးကလည်းလာပြန်ချေသေးသည်။သူသည်အရွေးခံတိုက်နယ်ရပ်ကွက်တစ်ခုမှသူကြီးဖြစ်လျက်သူ့မဲများကိုသာဓုကိုပေးစေမည်။ သူကမူဟန်ဆောင်လောက်သာနေမည်။သူ့ကိုငွေ၁၅ဝဝကျပ်ပေးပါဟုဈေးခေါ်သည်။ခေါင်းခါလိုက်သောအခါ တစ်ရက်တခြား ဈေးကျသွားသည်။၁ဝဝဝကျပ်၊၇၅ဝကျပ်၊နောက်ဆုံး၅ဝဝကျပ်မလျှော့နိုင်ဟုဆိုသည်။သာဓုကမူ .ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး-လာကိုမလာနဲ့တော့-ဟု-အော်ပစ်လိုက်ရသည်။ပြဿနာကားဤတွင်မရပ်သေး။တစ်နေ့သောညနေ၆နာရီခွဲလောက်ပုဇွန်တောင်မြူလူကြီးဟောင်းဒေါ်တင်ရောက်လာပြီး ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စအရေးကြီးသောစကားပြောလို၍'ဟုလာခေါ်သဖြင့်(မောင်ဝဏ္ဏတို့အမေနှင့်လည်းဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူဖြစ်၏။) လက်ညှိုးညွှန်ရာကားမောင်းခဲ့၍ရွှေတိဂုံဘုရားအနီးသို့ရောက်မှသာဓုကမေးမိသည်။ဘယ်သွားမှာလဲ-မမတင်''အေး၊-မောင်ဖေသန်းကို-အစ်ကိုကြီးက-တွေ့ချင်လို့တဲ့'ဘယ်အစ်ကိုကြီးပါလိမ့်'ဒေါက်တာ-ဗမော်'သာဓုလည်း-ကားကို-ဦးဘရီဇရပ်ရှေ့တွင်-ထိုးရပ်လိုက်၏။(ထိုစဉ်ကလက်ဝဲမောင်းစနစ်။)နို့မမတင်ပြောတော့-မြူရွေးပွဲကိစ္စ-တိုင်ပင်စရာ-အရေးကြီးလို့ဆို'အေးလေ၊-မင်း-သေချာပေါက်-မနိုင်ချင်ဘူးလား၊-ခုရွေးကောက်ပွဲမှာ'စကားအသွားအလာကို-သာဓု-ရိပ်မိပြီ။-သို့သော်-တိတိကျကျ-သိလိုသည်နှင့်-သာဓုက-ခေါင်းညိတ်လိုက်၏။ဒီလိုလေ-မောင်ဖေသန်းရဲ့မင်းရေးပြီးရိုက်ဝေတဲ့ကြေညာချက်ကိုအစ်ကိုကြီးဖတ်ရတော့-ဒီသာဓုဆိုတာ-ဘယ်သူလဲ-တဲ့။ ဦးဖေသန်းခေါ်စာရေးဆရာသာဓုဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးထားတော့သူမရှင်းဘူးထင်ပါရဲ့၊ဒါနဲ့မမတင်ကကျွန်မမောင်တော်တယ်လို့ ပြောတော့-အဲ-အဲ-အစ်ကိုကြီးတပည့်မောင်မြိုင်ကိုလည်းသူကစုံစမ်းခိုင်းထားတာကိုး'မမတင်စကားများ-တစ်ဆက်တည်း-ဇတ်စုံခင်းနေ၍-ရှုပ်သွားသောကြောင့်-သာဓုက-ထပ်မေးသေး၏။ဒီလို-ဒီလို၊-မောင်ဖေသန်းရဲ့ကြေညာချက်ဖတ်ပြီးအစ်ကိုကြီးဒေါက်တာဘမော်ကအတော်သဘောကျနေတာနဲ့မောင်မြိုင်(ယခု ကျောက်ကုန်းတွင်နေသူ)ကိုစုံစမ်းခိုင်းတော့မမတင်ရှေ့တင်ပဲသူကပြောတယ်၊ကုန်ဈေးတန်းသခင်ဖေသန်းဆိုတာ သူပဲဆိုတော့' အစ်ကိုကြီးလေသိပ်ဝမ်းသာသွားတယ်၊ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲမမတင်ကိုအခေါ်ခိုင်းတာနဲ့ခုထွက်လာတာပဲ'စကားအသွားအလာကိုခြားခြားနားနားရှင်းသွားပြီဖြစ်သော်လည်းထပ်သိလိုသေးသည်နှင့် . . .ခေါ်ခိုင်းပြီးကျွန်တော့်ကိုမဟာဗမာမြူလူကြီးလောင်းအနေနဲ့အရွေးခံခိုင်းမယ်ဆိုပါတော့'(မဟာဗမာအဖွဲ့သည်ဒေါက်တာဘမော်၏ ပါတီ)နေဦး၊-မမတင်-ရှင်းပြဦးမယ်၊-ခု-မောင်ဖေသန်း-ပြိုင်ရမှာကသုံးယောက်နော်၊ဟိုကျားကူးကွက်သစ်သူကြီးဆိုတာက မဟာဗမာအနေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပါအစ်ကိုကြီးကပေးပြီးအရွေးခံခိုင်းထားတာကွယ့်၊ရှင်းပလား၊-အဲ-တကယ်လို့မောင်ဖေသန်းက ဒေါက်တာဗမော်နဲ့တွေ့ပြီးလို့မဟာဗမာအနေနဲ့အရွေးခံဖို့သဘောတူရင်ကျားကူးကွက်သစ်သူကြီးကိုနုတ်ထွက်လွှာတင်ခိုင်းလိုက် မယ်တဲ့၊ဒါမှမဟုတ်လည်းသူနဲ့ပတ်သတ်သမျှမဲဆန္ဒတွေ-မောင်ဖေသန်းရ-အောင်-ကျိတ်ပြီးထည့်ခိုင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်'မဖြစ်နိုင်၊လုံးဝမဖြစ်နိုင်၊မူလကတည်းကပါဝင်အရွေးခံလိုစိတ်မရှိခဲ့ဘဲရပ်ကွက်ကရောသာဓု၏စာရှုပရိသတ်ကပါတိုက်တွန်း၍လက်ခံပြီးတစ်သီးပုဂ္ဂလအမည်ဖြင့်စီစဉ်ခဲ့သည်။ယခုမှမဟာဗမာ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပြောင်းရမည်ဆိုသော်နိုင်ငံရေးအရထိုထက်ရှက်စရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်သည်ရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်။ဘာစဉ်းစားနေတာလဲကွယ့်၊သြော်၊တစ်ခုလည်းမှာလိုက်သေးတယ်၊သခင်ဖေသန်းကိုပြောပြပါတဲ့၊တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ပဲအရွေးခံပြီး နောက်မှကြည့်လုပ်တာပေါ့တဲ့၊လိုအပ်တဲ့အကူအညီအကုန်ရမယ်၊ခုကောမင်းပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကုန်နေပလဲ၊အဲဒါထက်မက ရအောင် မမတင်ပြောပေးမယ်လေ'ထိုစကားသည်စောစောကရေးခဲ့သည့်-အင်ပို့-လိုင်စင်ရမယ်-ဟူသောမြှူလုံးကဲ့သို့ဖြစ်နေရုံသာမကလူကောင်းတစ်ယောက်ကို သစ္စဖောက်သင်ပေးသည့်သဘောမျိုးအများဆုံးပါနေသောကြောင့်. . .တော်ပါတော့-မမတင်၊ဒီကိစ္စကတော့လုံးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ဆရာကြီးကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါ၊တစ်နေ့သောအခါမှပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပေါ်ရင်အချိန်အခါမရွေးခေါ်ပါလို့နော်၊ခုဟာကတော့အတော်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲမမတင်၊ကျွန်တော့်ကိုစေတနာ မေတ္တာနဲ့အရွေးခံခိုင်းတဲ့လူထုကိုကျွန်တော်မလိမ်ချင်မညာချင်မညစ်ပတ်ချင်ဘူးဗျာ'မမတင်-ငိုင်သွားသည်၊အတော်ကြာအောင်စကားမပြောနိုင်ဘဲရှိနေစဉ်သာဓုလည်းကားကိုပြန်ကွေ့ကာပုဇွန်တောင်ဘက် မောင်းထွက်ခဲ့၏။သူ့အိမ်ရှေ့ရောက်၍ကားပေါ်မှအဆင်းတွင်. . .အေးလေကွယ်၊ဒီတစ်ညတော့စဉ်းစားလိုက်ပါဦး၊မနက်ဖြန်၁နာရီလောက်-မတင်-လာခဲ့ဦးမယ်'မဖြစ်ပါဘူး-မမတင်၊-နိုင်ငံရေးမှာတစ်သက်လုံးအငြိအစွန်းမရှိခဲ့တာခုမှယုတ်မာရမယ်ဆိုရင်'သို့လျှင်ဆက်၍-ဖဆပလ-မှတစ်နေရာပေးမည့်ကိစ္စပါပြောပြလိုက်ရသေး၏။ထိုမြူရွေးပွဲတွင်သာဓုကမြိုကတော်ဝန်လောင်းဦးသိမ်းမောင်-ဖဆ-ကို-၈၂-မဲဖြင့်ကပ်ရှုံးသွားသည်။မကြာမီဦးသိမ်းမောင်လည်း မြို့တော်ဝန်ဖြစ်သွားသည်။ထို့နောက်တစ်နှစ်သာသာကြာသောအခါ-တပ်ထဲကမြတ်ကိုကို-ဝတ္ထုဖြင့်သာဓုအားစာပေဗိမာန်ဆုချီးမြှင့်သည့်အခမ်းအနားတွင် ဦးသိမ်းမောင်အားတွေ့ရသည်။ဒီမှာကိုသာဓု-စာပဲရေးပါ၊စာများများရေးပါ၊ဒီမြူရွေးပွဲတို့အမတ်ရွေးပွဲတို့၊-အိုဗျာ-ဘာမှဝင်မလုပ်ပါနဲ့'သို့-တုံးတိတိကြီး-ပြောလိုက်သောကြောင့်-သာဓုပင်-ယောင်ချာချာဖြစ်သွားကာအကြောင်းရင်းကိုရှင်းပါရန် မတ္တာရပ်လိုက်မှ. . .ခင်ဗျာ့စာတွေကိုကျွန်တော်လည်းဖတ်တယ်၊တစ်အိမ်လုံးလည်းဖတ်တယ်၊သိပ်ကြိုက်တယ်၊ရှင်းရှင်းဝန်ခံမယ်ဗျာ၊-ကိုသာဓုကို ကျွန်တော်ကြည်ညိုတယ်၊-ကဲ-ကဲ-ဘယ်အထိလေးစားတယ်ဆိုတာထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြူရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အမှန်အတိုင်းဆိုကျွန်တော်ရှုံးတယ်၊ခင်ဗျားကအပြတ်အသတ်နိုင်တယ်''ဟောဗျာ'အဲဒါပဲ၊ကျွန်တော့်အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့-ဖဆ-ဆိုရှယ်တွေက-မဲလိမ်-မဲခိုး-လုပ်လို့ပေါ့၊နို့မို့ရင်'ဦးသိမ်းမောင်လည်း-ခပ်လှမ်းလှမ်းသို့-သာဓုအား-လက်ညှိုးညွှန်ပြရင်း. .သူ့ကို-သိသလား'သိတာပေါ့၊-ဟိုတုန်းက-နိုင်ငံရေး-လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပဲ'သိပ်လည်တဲ့လူ-ကိုသာဓု၊သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်တာ၊ခင်ဗျားကတော့အဲဒီနေ့ကမဲရုံနားမှာပဲရပ်နေတာနော်၊သူကတော့ ရဲဘော်ဝါတွေအဲဒီတုန်းကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းလေ၊ ကားမိဖူးမှာပေါ့၊မလက်တိုရွာဒုက္ခသည်တွေကိုပါကားကြီးကားငယ်နဲ့ တင်လာပြီးမဲမထည့်ရသေးတဲ့နာမည်တွေနဲ့အကုန်ကျုံးထည့်သွားတာပဲ'သာဓု-ပါးစပ်အဟောင်းသာ-ငေးနေမိ၏။-ဖဆ-မြို့တော်ဝန်တစ်ယောက်အနေနှင့်ဤစကားမျိုးပြောထွက်လိမ့်မည်မထင်မိ။အဲဒါတွေ-ဦးသိရတော့-တော်တော်ရှက်မှာပဲနော်'အိုဗျာ၊-မျက်နှာတောင်-ဓားနဲ့လှီးပစ်ချင်တယ်'နို့-ဘာပြုလို့-အရွေးခံသေးလဲ-ဒါဖြင့်'အဲ့ဒီအချိန်မှာ-ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့နဲ့မကင်းနိုင်သေးဘူးလေ၊-ထမင်း-အိုးကလဲ-အကွဲမခံနိုင်သေးတော့၊-အင်း-သားတွေ သမီးတွေ၊-ခုတော့-တော်ပါပြီ-ဗျာ၊ဒါနောက်ဆုံးပဲ၊ရှေ့လျှောက်ဘာမှဒီလိုမသန့်ရှင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘူး၊ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ'သာဓု-ဘာပြန်ပြောရမည်ကို-မသိ၊-အကယ်တိ-သူသာဆက်၍-ဖဆ-တို့နှင့်လက်တွဲသွားမည်ဆိုကသူ့ပညာအရည်အသွေးနှင့်ဆိုကဝန်ကြီးအထိမျှော်လင့်ချက်ရှိသည်သာဖြစ်၏။အမှန်ကတော့-ကျွန်တော်လည်း-သူများတွေတိုက်တွန်းပြီး-အတင်း-လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလို့အားနာတာနဲ့'မလုပ်နဲ့တော့-ကိုသာဓု၊-ခင်ဗျားကို-စေတနာ-ဆန္ဒမဲအားကိုးနဲ့သာလုပ်ရင်သူတို့ခေတ်မှာတစ်သက်လုံးမနိုင်ဘူး၊-အဲ-ခုနက စကားတောင်ကျန်နေသေးတယ်၊မလက်တိုဒုက္ခသည်တို့၊ရဲဘော်ဝါတို့ရဲ့မဲနဲ့တင်စိတ်မချရလို့ခင်ဗျားမဲပုံးကိုဖင်ကနေဝက်အူလှည့်နဲ့ ဖွင့်ခိုးပြီးကျွန်တော့်မဲပုံထဲထည့်ကြရသေးသတဲ့၊အဲဒါကိုများဗျာဧရာမစွန်စားခန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေကျနေတာပဲ၊ ကျွန်တော့်ဆီလာပြီးအားပါးတရပြောကြသေးတယ်၊ကျွန်တော်ဖြင့်ရှက်လွန်းလို့'ဦးသိမ်းမောင်ပြောပြမှပင်မဲပုံးကိုသံနှင့်မလုပ်ဘဲသစ်သားသေတ္တာသုံးသည်မှာ-ဝက်အူလှည့်-အားကိုးဟု-သာဓု နားလည်လိုက်ရတော့၏။အစ်ကိုကြီးဦးသိမ်းမောင်အားလည်းနောင်တွင်စာပေကိုသာနာနာဖိရေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံလိုက်ရ၏။ဆုပေးပွဲပြီး၍အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ-သားလတ်-ဗလကြီး(သုမောင်)ကိုချော့သိပ်နေသောသူ့ကြီးတော်ဒေါ်သိန်းသိန်းက. . .ဟဲ့-သာဓု-မင်းနေကောင်းရဲ့လား'ကောင်းပါတယ်-သိန်းသိန်းရဲ့-ဘာပြုလို့လဲ'ဟယ်၊-မင့်ကြည့်ရတာ-စာပေဗိမာန်ဆု-ရလာတာနဲ့မတူ၊ရွှင်ရွှင်ပျပျလည်းမရှိ၊ဘာတွေဘယ်သူနဲ့ဘုကျလာပြန်သလဲ'မှန်၏။သာဓုမှာစာပေဆုထက်အလေးအနက်ထား၍စဉ်းစားလာသည့်အကြောင်းရင်းကား. . .၁။ဒေါက်တာဗမော်ငွေကုန်ခံ၍မဟာဗမာမြူလူကြီးလောင်းအဖြစ်အရွေးခံခိုင်းသူကျားကူးသူကြီးကသူလိုချင်သောငွေရလျှင်သူ့မဲများကိုသာဓုကိုကျိတ်၍ခွဲပေးမည်။မြူလူကြီးအဖြစ်ထက်ငွေကိုလိုချင်နေသည်။၂။ဦးသိမ်းမောင်ကားဖဆ၏မြူလူကြီးလောင်းဖြစ်သည်။အရွေးလည်းခံရသည်။ထိပ်ဆုံးမြို့တော်ဝန်လည်းဖြစ်နေသည်။ သို့တိုင်အောင်လိမ်ညာညစ်ပတ်၍ရသောမဲနှင့်တက်ခဲ့ရသောကြောင့်သူရှက်နေသည်။ဖဆ၊ကလိမ်ကျမှုများဖွင့်ထုတ်ပြသည်။ နောင်သောအခါဤလိုအရှုပ်များတွင်သူပါဝင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောသည်။ဤနှစ်လီကိုတွေးရင်းပြန်လာသောကြောင့်ထိုအရေး၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြင့်သာဓုမျက်နှာ၌မည်သို့ဖြစ်နေသည်ကိုကားသာဓုလည်းမသိ။သာဓု(သာဓု လူဝါးဝတယ် စာအုပ်မှ) http://www.shwemawkunn.com/
မင်း ငါ့ဆီ ပြန်လာခဲ့ပါ
(အောက်တိုဘာ၁၇-ရက်၊၂၀၁၀-ခုနှစ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်?ကိုမင်းကိုနိုင်၏မွေးနေ့)အကို--လေးစားနေပါတယ်။လေးစားနေဆဲပါ။အကိုရဲ့ပေးဆပ်မှု၊အနစ်နာခံမှု။တွေဟာ၊ညီတို့လူငယ်တွေရင်ထဲမှာအမြစ်တွယ်နေမှာပါ။ညီတို့လည်းအကိုလိုနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကောင်းစားအောင်၊တတ်နိုင်တဲ့နေရာကကြိုးစားနေပါတယ်။ ရွာဆော်ကြီးFacebookမှ... ကိုကိုကြီး၊မင်းကိုနိုင်၊ဌေးကြွယ်....။ကျုပ်-ခင်တာ၊ကျုပ်-လေးစားတာ၊ကျုပ်-မေ့မရတာ-ဌေးကြွယ်...။ကျုပ်တို့ရဲ့ဌေးကြွယ်....။စမ်းချောင်းသား-ဌေးကြွယ်...။ဘူမိဗေဒကျောင်းသား-ဌေးကြွယ်...။ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေးကြွယ်...မင်း...ဘယ်ဆီမှာလဲ....။ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေးကြွယ်...ဘားလမ်းထဲမှာလား....။ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေးကြွယ်...ဦးချစ်ဆိုင်မှာ ရှိမလား....။ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေးကြွယ်...မင်း ငါ့ဆီ ပြန်လာခဲ့ပါ....။ အောင်မျိုးထွန်း၁၇- ၁၀- ၂၀၁၀
လမ်းပြကြယ် လူပါးဝတယ်လို့ ဆိုရင်လည်း အပြောခံမယ်ဟေ့
အားလုံးသိရန်လမ်းပြကြယ်ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။လူပါးဝတယ်။လူပါးဝတယ်လို့ပြောချင်ပြောကြပါ။ လမ်းပြကြယ်ကမည်သည့်ပါတီဝင်မှမဟုတ်ပါ။သေဆုံးသည်အထိအမတ်မလုပ်၊မည်သည့်ပါတီမှမ၀င်ပဲတတိယအင်အားစုတစ်ရပ်အနေနှင့်ရပ်တည်နေမယ်ဆိုတာသိထားစေချင်တယ်။တစ်ခုကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အင်အယ်ဒီပါတီမကျဆုံးအောင်ရှေ့ဆုံးကရပ်တည်သွားမယ်။ပါတီဝင်မှ အင်အယ်ဒီလူလို့သတ်မှတ်တဲ့လူတွေသိအောင်ပြောပြလိုက်မယ်။၅၈သန်းသောပြည်သူလူထုထဲမှာ(NLD)အင်အယ်ဒီပါတီမ၀င်ထားပေမယ့်မိမိကိုယ်မိမိ(NLD)အင်အယ်ဒီပါတီဝင်လို့ခံယူပြီးနိုင်ငံအတွက်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူတွေဒုနှင်ဒေးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ပါ။ပြောမည်။ဆရာကြီးဝင်းတင်၊နိုင်ငံရေးဂုရုကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့်နောက်လိုက်အပေါင်းအပါတစ်စုကြောင့်ပြည်သူချစ်တဲ့ဒေါ်စုနှင့်အင်အယ်ဒီပါတီကြီးကျဆုံးခန်းရောက်နေပြီ။လမ်းပြကြယ်ကပြည်သူလူထုထဲကလူတစ်ယောက်လေ။ပြည်သူကြားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲကစကားကိုအနီးစပ်ဆုံးသိတယ်။ဒေါ်စုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေသိအောင်ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနကိုအားကိုးတကြီးနှင့်မျှော်လင့်ပြီးပြောမည်ကြံခဲ့တယ်။ အင်အယ်ဒီသတင်းကိုသာထည့်ပြီးဦးတင်ဦးမျက်စိခွဲတာနိုင်ငံရေးလား။သူစင်ကာပူကပြန်ရောက်တာနိုင်ငံရေးလား၊အောက်ကျခံပြောပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်သူတွေအကျပ်အတည်းနှင့်လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးခွင့်မရတာကိုကျတော့အဖက်မလုပ်၊ဦးဝင်းတင်၊ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့အောက်ခြေမှာဖယိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့အောက်ခြေအင်အယ်ဒီပါတီဝင်တွေပြန်လည်စည်းရုံးနေတာကို(ပြည်သူလူထုကြားဆင်းစည်းရုံးနေတယ်လို့လိမ်ကြေညာနေတယ်။ အသံလွှင့်ဌာနတွေအားလုံးထဲမှာRFAကဘက်အလိုက်ဆုံးဟေ့)လို့လမ်းပြကြယ်အော်လိုက်ပြီနော်ဘာပြောမလဲ-ကြိုက်သလိုဝေဖန်၊ပြည်သူလူထုမျက်နှာပဲကြည့်တော့မည်ဟေ့-------လမ်းပြကြယ်ပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုကိုရအောင်တည်ဆောက်နေသည်။ယုံကြည်မှုလည်းရခဲ့ပြီ။လမ်းပြကြယ်အိမ်သို့ ၅၈သန်းသောပြည်သူလူထုထဲမှအချို့နေ့စဉ်နေအ်ိမ်သို့လာပြီးသူတို့အခက်အခဲကိုတင်ပြပြီးအကူညီတောင်းကြသည်။ တတ်နိုင်သမျှလာကူညီပေးခဲ့သည်။နေ့စဉ်နှင့်အမျှ၂၅ယောက်နှင့်၃၀ယောက်ပျမ်းမျှနေ့စဉ်နေအ်ိမ်သို့လာနေကြသည်။ ဒီတော့လမ်းပြကြယ်မေးတော့မည်။နိုင်ငံတော်အတွက်ဒီမိုကရေစီရအောင်တိုက်နေကြသောနိုင်ငံရေးသမားများနေအိမ်သို့မည်သူကယုံကြည်အားကိုးတကြီးနှင့်လာခဲ့ဖူးပါသလဲလို့မေးမည်။သင်ဖြေနိုင်မလား?။ဟန်မဆောင်ကြေးလက်တွေ့စိန်ခေါ်နေပြီ။ခင်ဗျားတို့ထက်ပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ထဲစကားကိုအနီးစပ်ဆုံးသိတယ်။(အဲဒါကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပိုသိစေချင်တယ်)သိအောင်လဲကြိုးစားနေတယ်။ဒေါ်စုကိုအားကိုးတယ်။အကြံယူမည်။ဒေါ်စုအတွက်တိုက်မည့်။နိုင်ငံရေးပါတီချင်းပူးပေါင်းလက်တွဲဖို့မကြိုးစားဘူး။ကြက်နိုင်ငံရေးသမားအကျင့်ကျင့်သုံးနေတာမနေ့ကကြားလိုက်တယ်။ ပြည်ပအသံလွှင်ဌာနကဒီ-ငြိမ်းပါတီကNDFပါတီကိုအပုတ်ချတယ်။ဦးလှမောင်ရွှေဆိုသူထံမှအလှူငွေလက်ခံလို့စိတ်မသန့်ဘူးတဲ့။ဒီ-ငြိမ်းကဘယ်ကပေါက်ဖွားဆင်းသက်လာတာလဲ။(ဖဆပလ)ခေတ်နိုင်ငံရေးအကျင့်ပျက်လူတစ်စုက ဆင်းသက်လာတာလို့ပြောရင်နာမလား။နာလိုက်ပါ။လမ်းပြကြယ်ရှင်းရဲတယ်(ရန်သူ့လက်နက်ဟာမိမိလက်နက်ဖြစ်ရန် စိတ်ဓါတ်)နှင့်တိုက်နေတယ်လို့NDFဘက်ကလိုက်ပြီးပြောလိုက်မယ်။ကဲ-ဘာပြန်ပြောမလဲ။ဝေဖန်လေဂရုမထားဘူး။NDFကဦးလှမောင်ရွှေထံမှငွေယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်တယ်ဘယ်သူ့ကိုထိခိုက်သလဲ-ကဲ-ပြော။ဒီ-ငြိမ်းပါတီကအရည်အချင်းမရှိသိက္ခာမရှိအကျိုးမရှိသူ့ကိုငွေမလှူမထောက်ပံ့လို့မနာလိုတာ ထင်ရှားနေတယ်။ဒါလားမြန်မာပြည်လူထုကိုကယ်မည့်ပါတီ။မိမိဇာတိရုပ်ပြနေတာပြည်သူကမသိဘူး၊မတတ်ဘူးလို့မှတ်နေတယ်လို့လမ်းပြကြယ်လူပါးဝလိုက်တယ်လေပြန်ပြောမလား။ပြန်ပြော(အဲဒိလိုပါတီမျိုးကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက် တောင်မနည်းရအောင်ကြိုးစားရမယ်)ဆိုတာကြိုပြောလိုက်မယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်၅၈သန်းသောပြည်သူလူထုကိုငဲ့ညှာပါဦးနအဖကိုကြက်ဥတိုက်အားမွေးပေးနေကြတဲ့ဒီ-ငြိမ်းလိုပါတီတွေရှိသေးတယ်။ဦးဝင်းတင်၊ဦးဥာဏ်ဝင်းလည်းပြင်သင့်ပြီ။လမ်းပြကြယ်ပါတီထောင်ခဲ့လျှင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံမှငွေအလှူခံမယ်ထောက်ပံ့လဲယူမှာပဲ။ကိုယ့်မှာကယခင်ကတည်းကဒုတ်မရှိဘူးလေ။သူ့ဒုတ်နဲ့သူပြန်ရိုက်ရန်ကြိုးစားတာအဆန်းလား။ဥပမာ-လက်တွေ့ထောက်ပြမယ်။၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကငွေနှင့်စည်းရုံး၊အာဏာဖြင့်စည်းရုံးတယ်။ မက်လုံးပေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ပါတီတွေသာပြည်သူလူထုကြားထဲကိုအမှန်တကယ်ဆင်းပြီးလေ့လာရင်သိလိမ့်မည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကပေးတာယူနေကြတယ်။မဲပေးရန်ဆုံဖြတ်တဲ့ပြည်သူ့ဦးနှောက်သူ့ကိုမပေးဖို့နှလုံးသားထဲမှာဝှက်သိမ်းထားတယ်။မလောက်လေးမလောက်စားနိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်နှင့်မိမိပါတီအလုပ်မိမိမလုပ်ပဲအချင်းချင်းအပုတ်ချတတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပဲလုပ်တတ်တယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်အတိုက်အခံများကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့်တစညပါတီတို့ကိုအတုယူစရာအချက်(၁)ခုကိုလမ်းပြကြယ် ထောက်ပြလိုက်မယ်(၀ါ)လူပါးဝပြလိုက်မယ်။ခင်ဗျားတို့ကသူတို့နှစ်ပါတီကိုအလုပ်ပျက်ခံပြီးကျီးကန်းလိုဝိုင်းအာနေကြတယ်။ သူတို့ကဘာမျှပြန်မပြောပဲသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြတယ်တွေ့လား…နောက်ဆုံးအနေနှင့်လမ်းပြကြယ်ပြောလိုက်မည်။ ဦးလှမောင်ရွှေကိုလည်းမသိ-မမြင်ဘူးပါ။ဒါပေမယ့်အင်ဒီအက်(NDF)နှင့်ယူဒီပီ(UDP)ပါတီတို့မဲအောင်နိုင်ရေးလုပ်နေတဲ့ လမ်းပြကြယ်ကဦးလှမောင်ရွှေထံသွားအလှူခံမည်။ပေးမလားယူမယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့်သားအဖတော်ပြီးလည်ပင်း ဖက်ထားပါစေ။သူတို့ကိုပြန်ရိုက်ဖို့ဒုတ်လိုနေတယ်လေ။ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့်တစညကိုနိုင်ဖို့ငွေဖြစ်တဲ့ဒုတ်လိုနေတယ်။ရိုက်ခွဲဖို့လေ လမ်းပြကြယ်ကိုပြောမလား-စိန်ခေါ်မလား-လူပါးဝလိုက်ပြီဟေ့--။ (အတိုက်အခံပါတီတွေမညီညွတ်သေးသရွေ့လမ်းပြကြယ်စိန်ခေါ်နေမယ်)ဦးအေးမြင့်(လမ်းပြကြယ်)၂၀၁၀ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာ(၁၄)ရက်။
သို့... လျူရှောင်ဘို
ခင်ဗျားကို၊ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး၊ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကြီးကိုချီးမြှင့်နေတဲ့အချိန်မှာ၊ ခင်ဗျားဟာ၊ဟူနဲ့ဝမ်တို့ရဲ့အကျဉ်းထောင်းထဲမှာစံမြန်းနေရပေမဲ့၊ ခင်ဗျားကို၊တရုတ်ပြည်တင်မကဘူး၊ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးကပါ၊ ချီးမွှန်းထောမနာပြုနေကြပါတယ်။လျူရှောင်ဘို၊ခင်ဗျားကို၊ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ပြောတဲ့၊ဟူကျင်တောင်နဲ့ဝမ်ကျားပေါင်တို့ဟာ၊တနေ့ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်သူတွေအဖြစ်နဲ့ခုံရုံးအတင်ခံရမှာပါ။ခင်ဗျားဟာ၊သန်းထောင်နဲ့ချီတဲ့၊တရုတ်ပြည်ကလူတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အတွက်အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့နှစ်ရှည်၊လများ၊လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လို့၊ဒီဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရလိုက်တာပါ။ ခင်ဗျားဟာ၊တရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထောင်ချခြင်းကိုခံရပေမဲ့၊အာဏာရှင်တွေရှေ့မှာ၊ဒူးမထောက်၊လက်မမြှောက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးကလူတွေ၊လူ့အခွင့်အရေးအတွက်လှုပ်ရှားသူတွေ၊အာဏာရှင်တွေကိုမကြောက်တဲ့သူတွေ၊အာဏာရှင်တွေကိုတော်လှန်၊ဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေ၊အာဏာရှင်တွေရဲ့ထောင်သွင်း၊အကျဉ်းချခံထားရတဲ့သူတွေ၊လွတ်မြောက်လိုသူတွေ၊တရားမျှတမှု၊လွတ်လပ်မှုတွေကိုခုံမင်၊နှစ်ခြိုက်သူတွေဟာ၊ခင်ဗျားနဲ့အတူရှိနေတယ်လို့ဒီဆုက၊သက်သေပြလိုက်တာပဲ။လျူ။ ဂန္ဓ၀င် အောင်ကျော်ဦး၈.၁၀.၁၀
Daughter of Mya Aye
-မ်ိန့်ခွန်းကိုမြန်မာဘာသာပြန်ထားတာတွေ့ရလို့ကူးယူပေးပို့လိုက်ပါတယ်။(ဘာသာပြန်ပေးသူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)။*ကျွန်မအဖေကိုကျွန်မပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့ဖူးတာကတော့သံတိုင်တွေကြားကတဆင့်မြင်တွေ့ရတဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲက အခန်းလေးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မက၄နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့၁၉၈၈ခုမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တဲ့အရေးတော်ပုံမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့မှုကြောင့်အကျဉ်းကျခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ထပ်တခါ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာငြိမ်းချမ်းစွာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းမှာပါဝင်ခဲ့လို့ထောင်ဒဏ်၆၅နှစ်နှင့်၆လအကျခံထားရပါတယ်။သူကကျန်းမာရေးတော်တော်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့မှာနှလုံးရောဂါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဆက်လက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းခံနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့အဖေဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၂၂၀၀ကျော်ထဲကမှတဦးသာဖြစ်ပါတယ်။များစွာသောအကျဉ်းသားတွေဟာနှိပ် စက်ညှင်းပမ်းခြင်းကိုခံနေရပါတယ်။သူတို့ဟာဆိုရွားလှတဲ့အခြေအနေအောက်မှာရှိနေကြပြီးသမရိုးကျဆေးဝါးကုသခွင့်ကိုလည်း မရကြပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာနှစ်ဆနီးပါးတိုးလာပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာဒီမိုကရေစီပြန်လည် တည်ဆောက်နေပါတယ်လို့ကမ္ဘာကိုပြောနေပါတယ်။နိုဝင်ဘာမှာသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲက မြန်မာပြည်ကိုစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဆောင်ကျဉ်းပေးမည့်ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာစစ်အာရှင်စနစ်ဆက်လက်အာဏာချုပ်ကိုင်ထားဖို့အတွက်ပုံဖေါ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်ပါတယ်။စစ်သားတချို့စစ်ယူနီဖေါင်းကနေအရပ်ဝတ်လဲ လိုက်တဲ့အပြောင်းအလဲသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဟာဘာမှမကွာခြားသွားတဲ့အာဏာရှင်တမျိုးတည်းကိုအရပ်ဝတ်နဲ့ပုံစံပြောင်းပြီး ထပ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကဆက်လက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်မပြောပြချင်တာကကျွန်မတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဆက် လက်ပြီးအကျဉ်းကျနေပါတယ်။သူမရဲ့ပါတီဟာဖျက်သိမ်းခြင်းခံထားရပါတယ်။စစ်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဘယ်သူပဲဘာပဲပြောပြော အကျဉ်းချခြင်းခံရပါတယ်။ဟာသလုပ်တာတောင်၊ကဗျာလေးစပ်တာတောင်အကျဉ်းကျခံကြရတယ်။မီဒီယာဆင်ဆာကလည်း များသထက်များလာနေပါတယ်။မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်းကတိုင်းရင်းသားလူအနည်းစုဧရိယာတွေမှာအရပ်သားတွေကိုဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးခံရတာ၊ရွာတွေမီးရှို့ခံရတာနဲ့ကလေးတွေ၊ကလေး ငယ်ငယ်လေးတွေပါမကျန် ပစ်သတ်ခံရတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကိုBurma Campaign UKကလက်ခံရရှိထားတဲ့အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၁၅တာကာလအတွင်းကျေးရွာပေါင်း၃၅၀၀ကိုဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေဟာစစ်အာဏာ ရှင်တွေကကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက်ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်တဲ့လုပ်ရပ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေဟာအာဏာကိုသူ့အလိုလိုဘယ်တော့မှ စွန့်လွှတ်မှာမဟုတ်တဲ့လူမဆန်စွာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှတဲ့လူသတ်သမားတွေရဲ့လုပ်ရပ်သာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့လေဘာပါတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့လေဘာအစိုးရကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားချင်ပါတယ်။လေဘာအစိုးရ(UK)ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းကြေညာတဲ့ပထမဦးဆုံးအစိုးရဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့အနေနဲ့ဒီထက်ပိုမိုအရှိန်ပြင်းတဲ့တွန်းအားတွေနဲ့ဆက်လက်ဦးဆောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်EUကစီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြတ်တောက်ရန်၊ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်နက်ရောင်းပေးမှုဖြတ်တောက်ရန်တို့အတွက်ဖိအားပေးလုပ်ဆောင်ပေးပါ။ကျွန်မအနေနဲ့လေဘာအစိုးရ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းMrGordonBrown,နှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းMrDavid Milibandတို့ကိုကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လုပ်ရှားမှုကိုဘာအကျိုးအမြတ်မှမရှိဘဲလှိုက်လှဲစွာထောက်ခံအားပေးမှုအတွက်အထူးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်မပြောကြားပါတယ်(လက်ခုပ်သံများ)။ဒီအတွက်ကျွန်မတို့တကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့အခုပြောတဲ့အတိုင်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ကျွန်မတို့မှာUNအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဆီကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မိကြောင်းmessageတွေမကြာခဏလက်ခံရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ဆောင်ချက်မှမရှိခဲ့ပါဘူး။မြန်မာစစ်အစိုးရဟာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေပါတယ်လို့ထပ်ခါတလဲလဲဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှဂတိမတည်ဘူး။UNကလည်းအခြေအနေအပြောင်းအလဲကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်လို့ထပ်ခါတလဲလဲပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအကျဉ်းထောင်ထဲမှာသေကြရမည့်အရေးကိုဘာကြောင့်ကျွန်မတို့စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုသေးလဲ။အမျိုးသမီးတွေမုဒိမ်းကျင့်ခံရမည့်အရေးကိုဘာကြောင့်ကျွန်မတို့စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုသေးလဲ။နောက်ထပ်ရွာတွေထပ်ပြီးမီးရှို့ခံရမည့်အရေးကိုဘာကြောင့်ကျွန်မတို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုသေးလဲ။မျိုးဆက်တခုပြီးတခုကလေးတွေဟာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးကာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။UNနဲ့တခြားတိုင်းပြည်ရဲ့အစိုးရတွေဟဒါကိုလစ်လျူရှုကာဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘဲနေမြဲတိုင်းနေနိုင်တယ်။ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေကိုဆက်လက်ပြီးလက်ခံနေလို့မဖြစ်ဘူး။မှန်ကန်တဲ့ဖိအားမျိုးကိုပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကဗိုလ်ချုပ်တွေဟာဖိအားဆိုတာကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူး။နိုင်ငံတကာ ဖိအားဆိုတာတကယ်ပဲမရှိမဖြစ်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အသုံးပြုလို့ရသမျှဖိအားမှန်သမျှကိုကျွန်မတို့အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်လာအောင်ဖိအားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုကိုဒီလိုစေ့စပ် ရေးအတွက်ဖိအားပေးဖို့UNဦးဆောင်တဲ့စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ရေးအောက်မှာကျွန်မတို့ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။UN ကော်မရှင်ကသွားပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့လူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ကမ္ဘာ့ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးသွားရင်ကျွန်မအဖေတို့ကိုထောင်ထဲသွင်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအပါအ၀င်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့ပြီး မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေအားလုံးတရားဝင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။တခါတလေကျမမှာမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သလောက်နီးပါးခံစားရမိပါတယ်။တခါတလေကျမအဖေကိုကျမတသက်ဘယ်တော့မှပြန်တွေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်မိတယ်။ဒါပေမယ့်ကျမဟာကျမအဖေရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုကိုအမှတ်ရနေပါတယ်။သူဟာဘယ်လောက်ပဲဝေဒနာခံစားနေရပါစေသူဘယ်တော့မှယုံကြည်ချက်ကိုစွန့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်မသိနေတယ်။ကျွန်မတို့ဟာလွတ်လပ်မှုရဲ့အောင်ပွဲကိုဆင်နိုင်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဒီအတွက်သင်တို့ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်။သင်တို့ဟာတောင်အာဖရိကကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်လည်းအကူအညီပေးကြပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Ko Kyaw Min Htike forward email မှတဆင့်ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
စမ်းချောင်းကြံ့ဖွံ့ရုံးဘေးမှာရှိတဲ့စမ်းချောင်းစည်ပင်ကိုစမ်းချောင်းကျွန်းတောဈေးပေါ်ကိုပြောင်းတော့မယ်တဲ့။စည်ပင်ရုံးအသစ်ဆောက်မယ့်နေရာမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုစရွှေ့ခိုင်းနေပြီလို့ကြားရတယ်။အခုရှိနေတဲ့စည်ပင်ရုံးနေရာမှာတာဝါကြီးဆိုလား..ကွန်ဒိုကြီးဆိုလား..ပေါ်လာမယ်တဲ့လေ။မြေနီကုန်းဒဂုံစင်တာရှိနေတဲ့နေရာဆိုတာတချိန်ကစမ်းချောင်းစည်ပင်ရုံးပါဘဲ။“ဖယ်ပေးတယ်....အသစ်ကြီးတခု၊ပေါ်လာတယ်....ရေ၊ရတယ်....”“ဖယ်ပေးတယ်....အသစ်ကြီးတခု၊ပေါ်လာတယ်....ရေ၊ရတယ်....”စမ်းချောင်းသူစမ်းချောင်းသားတွေ၊ဘာအမြတ်ထွက်သွားသလဲ.... ?စမ်းချောင်းမြို့နယ်က၊၀င်ပြိုင်မယ့်အမတ်လောင်းတွေဒါတွေ၊စဉ်းစားကြသလားAMTအောင်မျိုးထွန်း၃၀-၉-၂၀၁၀ ( ည ) --
Download Burmese Font Contact Me
အင်ဒမန်ဟီးရိုး ရဲ့အကြောင်း တစေ့တစောင်း ........
အင်ဒမန်ဟီးရိုး ဟာအောင်ဆုရှင်၊အိုက်စံ၊ အိတ်စ်ဇိုင်းမာတလိ၊ အင်ဒမန်ဟီးရိုး စတဲ့ ကလောင် နာမည်တွေနဲ့ ရေဒီယို ပြဇာတ်၊ ဆောင်းပါး၊ ဟာသ နဲ့ ကဗျာ တွေကိုရေးသေးတယ်။
ဒါတွေတင်ပဲလားဆိုတော့.. ဟီး .. ဟီး ..ကိုယ့်လိုပဲ၊လက်ယားနေတဲ့ကိုကို၊မမ
ဘလော့ဂ်ဆီကိုအလည်ခေါ်လာပြီးတော့၊တခြားသူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင် တာလည်းပါတာပေါ့နော်။
ဂလို .. ဂလို သောအကြောင်းလေးတွေကြောင့်၊ အင်ဒမန်ဟီးရိုးတယောက်
ဘလော့ဂ် လို့ ပြောရင်၊ဆုံဆည်းရာကိုမေ့လို့ မရဘူးလေ။ အင်ဒမန်ဟီးရိုးရဲ့
ဘလော့ဂ် လုပ်ဖြစ်အောင် အားပေးတာကတော့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ၊ ဘလော့ဂ်ဖြစ်လာပြန်တော့ ဆက်လုပ်လို့ အားပေးသူကတော့ ခင်မင်းဇော်
အခုတော့ ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူ .. ဟိုး .. အရှေ့ ကမှုန်ဝါးဝါးမြင်
နေရတဲ့ ဆီကိုသွားနေတယ်လေ …